Ga nke Ọma Case |
Ebu ebu nke ndị ahịa zụtara na Singapore
Onye ahịa Singapore a azụrụla otu ngwa ọrụ Polymer Ptfe rod extruder igwe site na ụlọ ọrụ anyị. Mgbe obere oge ojiji, ndị ahịa na-enye ezigbo evaluation.As ahịa na-abawanye, ahịa nwere ọhụrụ zuo maka ebu. T ...
Eyi gbazee-fụọ Machine dị njikere maka Mbupu
site ha na 20-09-04
PTFE Sintering Ọkụ Mbupụgara Ireland
site ha na 20-08-25
PTFE Rod Extrusion Machine Mbupụ na Ukraine
Mmekọrịta mbụ na STS Group LLC dị ezigbo mma ma ihe niile gara nke ọma. Dị ka otu n'ime onye ndú nke PTFE ngwaahịa emeputa, ọ bụ n'ezie ezi mmalite ka ha na-etinye ego mbụ PTFE Rod extruder igwe akara na 2 ebu nke 50mm na 35mm OD ịghọta usoro technology n'okpuru anyị Engi ...
Ptfe Rod Extrusion Machine Mbupụ Na Thailand Pattaya
site ha na 20-06-22
Na uru nke elu mmepụta na ala oriri ike, SUNKOO ọma meghere ya ahịa na USA, UAE, Korea, India, Russia, Malaysia, wdg na-enweta aha ọma n'etiti ndị ahịa. Ekele maka ụlọ ọrụ Rod Extrusion anyị nke ụlọ ọrụ rere na Thailand ， onye njikwa M ...
PTFE Plastic Extrusion Machine Wụnye - Successga nke Ọma
site ha na 20-05-24
PTFE Plastic tube Ram Extruder bụ n'ụzọ zuru ezu akpaka kọmputa na dị mfe ịghọta. Ọrụ dị oke egwu nke onye ọrụ ọ bụghị naanị na-echekwa ego na oge n'oge nhazi, mana ọ na-echekwa nchekwa nke ndị ọrụ. SUNKOO Machine Tech Co., Ltd bụ ọkachamara na PTFE & UHMWPE akụrụngwa r ...